22 ဘရပ်ဆဲလ်အပင်၏အအံ့သြစရာကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ကျန်းမာရေး
အားကစား Medvedev သည်ကောင်းမွန်သော coronavirus စာမေးပွဲပြီးနောက် Monte Carlo Masters မှထွက်ခွာခဲ့သည်
သတင်း ishပြီ ၂၂ ရက်တွင်ထုံးစံအတိုင်း Vishnu Vishal နှင့် Jwala Gutta: အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုပါ
နေအိမ် ကျန်းမာရေး အာဟာရ အာဟာရ Oi-Amritha K သည် အမ်ရီတာကေ ဇန်နဝါရီလ 16, 2019 ရက်နေ့တွင်
စိမ်းလန်းသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များအနက်ဘရပ်ဆဲလ်ပင်သည်အစင်းစင်းသောဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်ဆင်တူသောအရသာရှိပြီး၊ ဘရပ်ဆဲလ်ပင်သည်စုစုပေါင်းကျန်းမာရေးအထုပ်အဖြစ်ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ကနေအထိ  နှလုံးရောဂါကိုအဝလွန်ခြင်းသည်ဂေါ်ဖီထုပ်၏ပုံပန်းသဏ္lookာန်အားဖြင့်စွမ်းအင်တိုး။ ကျန်းမာသောအသားအရေကိုတိုးပွားစေသည်။
သို့သော်ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်မှုသည်သိသာထင်ရှားသောအရသာကြောင့်ဆိုးရွားသည့်ဂုဏ်သတင်းကိုအများလက်ခံသည်မဟုတ်။ သင်အံ့သြစရာဟင်းသီးဟင်းရွက် overcook သည့်အခါသို့သော်ဤဖြစ်ပျက်။ ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်သည်သင်၏နေ့စဉ်အစားအစာတွင်အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်ပြီး၎င်းသည်အသင့်ပြင်ဆင်နိုင်သောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
သင်၏ကျန်းမာရေးကိုကောင်းကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အာဟာရများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသောဘရပ်ဆဲလ်ပင်သည်သင့်အတွက်အထူးကောင်းမွန်သည် [နှစ်ခု] မျက်စိ၊ အရိုးများ၊
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်သော ၁၀၀ ဂရမ်တွင်စွမ်းအင် ၄၃ kcal၊ အဆီ ၀.၃ ဂရမ်၊ သီယို ၀.၁၃၉ မီလီဂရမ်၊ ရိုင်ဗလိုဗင်၊ ၀.၀၉ မီလီဂရမ်နီယမ်၊ ၀. ၀.၃၀၉ မီလီဂရမ်မီတာပရိုတင်း၊ သွပ်။ ပစ္စုပ္ပန်အခြားအာဟာရဖြစ်ကြသည်
450 မိုက်ခရိုဂရမ် beta-carotene
ဖောလိတ် 61 micrograms
ပိုတက်စီယမ် 389 မီလီဂရမ်
38 micrograms ဗီတာမင် A
85 မီလီဂရမ်ဗီတာမင် C
177 micrograms ဗီတာမင် K သည်
Cruciferous ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ၎င်းသည်ကင်ဆာကိုတားဆီးနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုလူသိများကြသည်။ လေ့လာမှုများအရဘရပ်ဆဲလ်အပင်မှဆာလဖာပါဝင်မှုသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင်အထောက်အကူပြုသည်။ ဆာလ်ဖာသည်ဆီးကြိတ်စတင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုကန့်သတ်ရာတွင်တိကျသောသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုဆိုထားသည်။  အဆုတ်ကင်ဆာနှင့်ပန်ကရိယကင်ဆာ။ ၎င်းနှင့်အတူ၎င်းသည်ကျန်းမာသောဆဲလ်များကိုဖျက်ဆီးသောကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေသောအခမဲ့အစွန်းရောက်များကိုဖယ်ရှားပေးသည့် antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်သည်ဗီတာမင်ကေများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ကယ်လစီယမ်စုပ်ယူမှုကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ဆီးမှတစ်ဆင့်အလွန်အကျွံအမှိုက်များကိုလျှော့ချရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ in မှပါဝင်သည်။ အရိုးသန်စွမ်းမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ကယ်လ်ဆီယမ်လိုအပ်သည်  အရိုးဓာတ်သတ္တုသိပ်သည်းဆ။ ထိုနည်းတူစွာ၊ ဘရပ်ဆဲလ်ရှိကြေးနီ၊ မန်းဂနိစ်၊ သံနှင့်ဖော့စဖရပ်စ်အစရှိသည့်ဓာတ်သတ္တုများအရိုးသန်စွမ်းမှုကိုတိုးတက်စေပြီးအရိုးနှင့်ဆိုင်သောပြissuesနာများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။  အရိုးပွရောဂါ။
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်တွင်တည်ရှိပြီးမတည်ငြိမ်သောဒြပ်ပေါင်းများနှင့်တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဟော်မုန်းပမာဏကိုစီမံရန်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ ဒါဟာအကျိုးသက်ရောက်စေသည်  သိုင်းရွိုက်ဂလင်းများနှင့်ယင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည်ဟော်မုန်းပမာဏကိုထိန်းညှိရာတွင်ကူညီသည်။
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်တွင်ဗီတာမင်စီများစွာပါဝင်ပြီး၎င်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်၏အဓိကအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထောက်ပြသည်။ လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုတိုးတက်စေရန်ဗီတာမင်စီသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသွေးဖြူဥထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ၎င်းသည် antioxidant အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်  နာတာရှည်ရောဂါများနှင့် oxidative စိတ်ဖိစီးမှု။
ဖောလစ်အက်ဆစ်  နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမွေးကင်းစထောင်သောင်းချီသောကလေးငယ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်အာရုံကြောပြွန်ချွတ်ယွင်းမှုများကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်မိခင်များကိုမျှော်လင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်များသည်ဖောလစ်အက်ဆစ်မြင့်မားသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်လိုအပ်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသင်၏နေ့စဉ်အစားအစာတွင်အသစ်ထည့်ရန်စီစဉ်နေပါကသင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်အကြံပြုပါသည်။
တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယ saree ဝတ်ဆင်ရန်မည်သို့မည်ပုံ
Cruciferous ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်၎င်း၏အစားအသောက်ဖိုင်ဘာပါဝင်မှုကြောင့်လူသိများသည်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ထိုင်ခုံကိုစုပုံခြင်းဖြင့်ဖိုင်ဘာသည်အစာခြေခြင်းလုပ်ငန်းကိုတိုးမြှင့်စေသည်။ ဒါဟာထိန်းညှိ  peristaltic ရွေ့လျားမှုကိုနှိုးဆွပေးခြင်းဖြင့်အစာခြေလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်အူသိမ်ကိုလွယ်ကူစွာရွေ့လျားစေသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း cruciferous ဟင်းသီးဟင်းရွက်သည်ဗီတာမင်ကေများစွာပါဝင်သည်။ ဗီတာမင်သည်သွေးခဲစေခြင်း၊ [ဆယ့်တစ်] တစ် ဦး ဒဏ်ရာ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အလွန်အကျွံသွေးဆုံးရှုံးမှု။ ဗီတာမင် K သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်သင့်လျော်သောသွေးခဲစေသည်။
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်အကောင်းတစ်ပမာဏကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်  ပိုတက်စီယမ်၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သောအရေးပါသောဓာတ်သတ္တု။ ပိုတက်ဆီယမ်သည်သွေးကြောများအတွင်းရှိဖိအားနှင့်တင်းမာမှုအဆင့်ကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်သွေးကြောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်ကိုလျော့ချပေးပြီးလေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့်သွေးကြောကျဉ်းခြင်းတို့၏အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချပေးသည်။
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်မှဗီတာမင်စီသည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ကြွက်သား၊ အရေပြားနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်သောကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီသည်  တစ်ရှူးဆဲလ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုပုံမှန်စားသုံးခြင်းသည်အနာများနှင့်ဒဏ်ရာများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာကုသပေးသည်။
ဗီတာမင် B မိသားစုသည်ဖောလိတ်၊ ရိုင်ဗိုဖလားဗင်၊ pantothenic acid၊ ဗီတာမင် B2 စသည်တို့သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ ပုံမှန်စားသုံးမှု  ဘရက်စလေအညွန့်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အားအစာကိုစနစ်တကျအစာကြေစေရန်၊ လိုအပ်သောအာဟာရများကိုစုပ်ယူပြီးကယ်လိုရီကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလောင်ကျွမ်းစေသည်။
အဆိုပါ glucosinolates [ဆယ့်ငါး] ဘရပ်ဆဲလ်တွင်အပင်ပေါက်ခြင်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏တုန့်ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းသည်နာကျင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကူညီသည်။ ဂေါက်ရောဂါ၊ အဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့်အခြားရောင်ရမ်းသည့်ရောဂါများခံစားနေရသူများအတွက်အကျိုးရှိသည်။
12. Aids ကိုယ်အလေးချိန်
အစားအသောက်ဖိုင်ဘာသည်ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်ကိုလျှော့ချရန်အပြုသဘောဆောင်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းလူသိများသည်။ အမျှင်ဓာတ်ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အမျှင်ဓာတ်ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘရစ္စလင်အညွန့်ကိုစားသုံးခြင်းကသင့်ကိုကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပါတယ်  သင်၏အဆက်မပြတ်တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသည့် leptin ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖောင်းပွမှုနှင့်ကျဉ်းကျပ်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီးသင့်အူမကြီးနှင့်အူသိမ်ကိုရှင်းထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းတွင်အလွန်နည်းသောကယ်လိုရီပါဝင်သည်။
ဘရပ်ဆဲလ်ရှိ antioxidant alpha-lipoic ပင်ပေါက်သည်  အဆိုပါဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်လျှော့ချနေစဉ်အင်ဆူလင် sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ဖို့သက်သေပြခဲ့ကြသည်။ ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရသူများတွင်တွေ့ရသော oxidative stress ကြောင့်ဖြစ်သောအပြောင်းအလဲများကိုကာကွယ်သည်။
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်သည်  အမြင်အာရုံကိုထိန်းသိမ်းရန်အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသိသောဗီတာမင်စီ။ မျက်စိအတွင်းတိမ်နှင့်အခြားအသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်သောအမြင်အာရုံပြproblemsနာများကဲ့သို့သင်၏ရောဂါများမှသင်၏မျက်စိကိုကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့်မျက်စိကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေသည်။ အလားတူစွာ antioxidant zeaxanthin သည်မျက်ကြည်လွှာကို macular degeneration ကဲ့သို့သောပြင်ပပျက်စီးမှုများမှကာကွယ်ပေးသည်။
ဘရပ်ဆဲလ်အညှောက်ရှိဆာလဖာဒြပ်ပေါင်းများသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်  သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုပုံမှန်စားသုံးခြင်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေသည်။
၏ကြွယ်ဝသောအကြောင်းအရာ [နှစ်ဆယ်] သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိသွေးနီဥထုတ်လုပ်မှုကိုထောက်ပံ့ရာတွင်ဘရပ်ဆဲလ်ရှိဇီဝရရှိနိုင်သည့်သံသည်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ hematopoiesis ၏ဖြစ်စဉ်ကိုကူညီခြင်းဖြင့်တစ်ရှူးများ၏အောက်ဆီဂျင်ကိုကူညီပေးသည်။
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်ရှိဗီတာမင်ဘီပါဝင်မှုသည်အကျိုးရှိသည် [နှစ်ဆယ့်တစ်] တိုးပွားလာတက်ကြွ။ ဘရပ်ဆဲလ်ပင်များစားသုံးခြင်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်စွာအသုံးချခြင်းတို့တွင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက် အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ထိရောက်သောအခန်းကဏ္ have ရှိသည်ဟုသတင်းပို့ကြသည်  လက်စထရောအဆင့်ကို။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှိအစားအသောက်အမျှင်များသည်အူအတွင်းရှိအသည်းအက်ဆစ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှထွက်လာသည်။ သည်းခြေရည်အက်ဆစ်ဖြည့်ရန်အလို့ငှာခန္ဓာကိုယ်သည်လက်စထရောကိုသုံးပြီးလက်ရှိအဆင့်ကိုလျှော့ချပေးသည်။
ဘရပ်ဆဲလ်ရှိ antioxidants များကဲ့သို့သောပင်ပေါက်သည် [၂။ ၃] ဗီတာမင်စီနှင့်အေသည်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုပုံမှန်စားသုံးခြင်းသည်သင့် ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးအထောက်အကူပြုသည်။
20. မြှင့်တင်ရန်အာရုံကြော function ကို
စနစ်တကျလည်ပတ်နေသည့်အာရုံကြောစနစ်ကိုသေချာစေရန်ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်များကိုပုံမှန်စားသုံးကြောင်းသက်သေပြသည်။ ၏ကြွယ်ဝသောအကြောင်းအရာ  Electrolyte တစ်ခုဖြစ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှိပိုတက်စီယမ်သည် ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်နှင့်ကြွက်သားတစ်ခုလုံး၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝသော antioxidant ဘရပ်ဆဲလ်ပင်သည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိသည်  အသားအရေကိုနူးညံ့စွာထိခိုက်စေခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ အသားအရေကြမ်းတမ်းသောဟင်းသီးဟင်းရွက်အကူအညီကိုပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်သုံးစွဲခြင်းသည်သင်၏အရေပြား၏အရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်။
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်တွင်ဗီတာမင်အေ၊ စီ၊ အီးနှင့် K စသည့်သတ္တုဓာတ်နှင့်အာဟာရများပါဝင်ပြီးသံ၊ သွပ်နှင့်ဖောလစ်အက်စစ်တို့ကဆံပင်ကြီးထွားမှုကိုတိုက်ရိုက်အထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းသည်အားနည်းသောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးအကျိုးပြုသည်  ဦး ရေပြားကျန်းမာရေး။
1/2 ခွက် toasted walnuts,
သံပုရာ ၁ လုံး၊
၃- ဇွန်းအပို - အပျိုစင်သံလွင်ဆီ၊
ပေါင်းစပ်ဖို့ Toss ။
2 ဇွန်းပန်းသီး cider ရှလကာရည်,
1 ဇွန်း grainy မုန်ညင်းနှင့်
2 ဇွန်းလတ်ဆတ်သော Flat- အရွက် parsley ကုန်တယ်။
450 ° F မှမီးဖို Preheat ။
ဘရပ်ဆဲလ်အညှောက်၊ ဇွန်းဆီ ၂ ဇွန်း၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းငရုတ်ကောင်း ၁/၂ နှင့်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းထဲထည့်ပါ။
၄၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင်ရွှေသည်အထိမိနစ် ၂၀ ထားပါ။
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်အညွန့်စားခြင်း အညွန့်သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည်။ Boldsky
ပန်းသီး cider ရှလကာရည်၊ ဇွန်း ၁ parsley၊ ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းကိုပန်းကန်လုံးထဲရောမွှေပါ။
ကျန်ရှိနေသောဆီထည့်ပြီးအဆက်မပြတ် whisk ။
Warfarin ကဲ့သို့သောသွေးခဲစေသည့်ဆေးကိုသုံးသောသူများသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှိဗီတာမင် K ပမာဏများသောကြောင့်ဘရပ်ဆဲလ်ပင်မှအဝေးသို့ထွက်သွားသင့်သည်။
Stromberg, ဂျေ (2015) ။ Kale၊ ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်၊ ပန်းဂေါ်ဖီနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်အားလုံးသည်တစ်ခုတည်းသောမှော်အပင်မျိုးစိတ်များဖြစ်သည်။ Vox, Vox မီဒီယာ, 10 ။
[နှစ်ခု]Ciska, အီး, Drabińska, N. , Honke, ဂျေ, & Narwojsz, အေ ​​(2015) ။ အသားပြုတ်ထားသောဘရပ်ဆဲလ်ပင်များ - ကြွယ်ဝသောဂလူးကို့ဆီနလိတ်အရင်းအမြစ်နှင့်သက်ဆိုင်ရာနိုက်ထရစ်။ Functional အစားအစာများ၏ဂျာနယ်, 19, 91-99 ။
Heimler, D. , Vignolini, P. , Dini, M. G. , Vincieri, F. F. , & Romani, အေ (2006) ။ Antiradical လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဒေသခံ Brassicaceae စားသုံးနိုင်သောမျိုးကွဲ၏ polyphenol ဖွဲ့စည်းမှု။ အစားအစာဓာတုဗေဒ, 99 (3), 464-469 ။
Podsędek, အေ (2007) ။ သဘာဝ antioxidants နှင့် Brassica ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ antioxidant စွမ်းရည်: ပြန်လည်သုံးသပ်။ LWT-Food သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၊ ၄၀ (၁)၊ ၁-၁၁ ။
Tai, V. , Leung, ဒဗလျူ, Grey က, အေ, ရိဒ်, ဗြဲ R. , & Bolland, အမ်ဂျေ (2015) ။ ကယ်လစီယမ်စားသုံးမှုနှင့်အရိုးဓာတ်သတ္တုသိပ်သည်းဆ: စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် Meta-analysis သည်။ Bmj, 351, h4183 ။
Levander, O. အေ (1990) ။ လူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ရောဂါအတွက်အစားအသောက်ဓာတ်သတ္တုစားသုံးမှုအတွက်သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထည့် ၀ င်သည်။ HortScience, 25 (12), 1486-1488 ။
McMillan, အမ်, Spinks, အီးအေ, & Fenwick, G. အ R. (1986) ။ သိုင်းရွိုက် function ကိုအပေါ်အစားအသောက် brussels အညှောက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ပဏာမလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ။ လူ့ဝိသဗေဒ,5(1), 15-19 ။
Singh က, ဂျေ, Upadhyay, အေကေ, Prasad, K. , Bahadur, အေ, & ရိုင်, အမ် (2007) ။ Brassica ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် carotenes, vitamin C, E နှင့် phenolics အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အစားအစာဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်, 20 (2), 106-112 ။
Malin, ဂျေ D. (1977) ။ ဘရပ်ဆဲလ်တွင်စုစုပေါင်းဖောလိတ်လှုပ်ရှားမှု - သိုလှောင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အက်စ်ကောဘစ်အက်စစ်ပါဝင်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အစားအစာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 12 (6), 623-632 ။
McConnell, အေအေ, Eastwood, အမ်အေ, & Mitchell က, ဒဗလျူ D. (1974) ။ အူသိမ်အူမလုပ်ငန်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်အစားအစာများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ။ စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဂျာနယ်, 25 (12), 1457-1464 ။
[ဆယ့်တစ်]Pedersen, အက်ဖ်အမ်, Hamberg, O. , Hess, K. , & Ovesen, L. (1991) ။ warfarin fi သွေးဆောင် anticoagulation အပေါ်အစားအသောက်ဗီတာမင် K ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြည်တွင်းဆေးပညာဂျာနယ်, 229 (6), 517-520 ။
Munro, C. C. , CUTCLIFFE, ဂျေ, & Mackay, D. (1978) ။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်ဘရပ်ဆဲလ်ပင်များ၏အာဟာရပါဝင်မှုသည်ရင့်ကျက်မှုနှင့်အပင်များကို N, P, K၊ စက်ရုံသိပ္ပံ၏ကနေဒါဂျာနယ်, 58 (2), 385-394 ။
Halvorsen, ခအယ်လ်, Holte, K. , Myhrstad, အမ်စီ, Barikmo, ဗြဲ, Hvattum, အီး, Remberg, အက်စ်အက်ဖ်, ... & Moskaug, Ø။ (2002) ။ အစားအသောက်အပင်များတွင်စုစုပေါင်း antioxidants တစ်စနစ်တကျစိစစ်။ အာဟာရ၏ဂျာနယ်, 132 (3), 461-471 ။
Pantuck, အီးဂျေ, Pantuck, C. ခ, ပန်းကုံး, ဒဗလျူအေ, မင်း, ခအိပ်ချ်, Wattenberg, အယ်လ်ဒဗလျူ, Anderson တို့, K. အီး, ... & Conney, အေအိပ်ချ် (1979) ။ brussels ပင်ပေါက်များနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်တို့၏လှုံ့ဆော်မှုသည်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ လက်တွေ့ဆေးဝါးဗေဒ & ကုထုံး, 25 (1), 88-95 ။
[ဆယ့်ငါး]Fenwick, G. အ R. , Griffiths က, N. အမ်, & Heaney, R. K. (1983) ။ ဘရပ်ဆဲလ်တွင်ပေါက်သည့်ခါးသောအရာ (Brassica oleracea L. var ။ gemmifera) - ဂလူးကို့ဆီလိတ်၏အခန်းကဏ္ and နှင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များ။ စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဂျာနယ်, 34 (1), 73-80 ။
Nyman, အီးအမ်ဂျီ, Svanberg, အက်စ်အမ်, & Asp, N. G. အအယ်လ် (1994) ။ အမျိုးမျိုးသောအပြောင်းအလဲနဲ့အောက်ပါအစိမ်းရောင်ပဲများ၊ brussels ပင်ပေါက်များနှင့်ပဲစေ့များမှခွဲထုတ်ထားသောမော်လီကျူးအလေးချိန်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ရေတွင်ပျော် ၀ င်နိုင်သောအစားအစာအမျှင်များပါ ၀ င်မှု။ စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဂျာနယ်, 66 (1), 83-91 ။
Packer, အယ်လ်, Kraemer, K. , & Rimbach, G. အ (2001) ။ ဆီးချိုရောဂါပြicationsနာများကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် lipoic အက်ဆစ်၏မော်လီကျူးရှုထောင့်။ အာဟာရ, 17 (10), 888-895 ။
Padayatty, အက်စ်ဂျေ, Katz, အေ, ဝမ်, Y. , Eck, P. , Kwon, O. , Lee က, ဂျေအိပ်ချ်, ... & Levine, အမ် (2003) ။ ဗီတာမင်စီဟာ antioxidant တစ်ခုအနေနဲ့ - ရောဂါကာကွယ်ရေးမှာသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္evaluationကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ အဟာရ၏အမေရိကန်ကောလိပ်၏ဂျာနယ်, 22 (1), 18-35 ။
Hasler, C. အမ် (1998) ။ အသုံးဝင်သောအစားအစာများ - ရောဂါကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ခြင်းတွင်သူတို့၏အခန်းကဏ္။ ။ ထိုအခါအစားအစာနည်းပညာ - ချန်ပီယံချီကာဂို, 52, 63-147 ။
[နှစ်ဆယ်]Adamson, ဂျေဒဗလျူ (1994, Aprilပြီ) ။ erythropoietin နှင့်သံဓာတ်ဇီဝြဖစ်စဉ်များကလူများတွင်သွေးနီဥထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှု။ ကင်ဆာပညာရပ်အတွက်ဆွေးနွေးပွဲများ (အတွဲ ၂၁၊ နံပါတ် ၂ ပျော့ပျောင်း ၃၊ စ။ ၉-၁၅) ။
[နှစ်ဆယ့်တစ်]Halliwell, ခ, Zentella, အေ, Gomez, အီး O. , & Kershenobich, D. (1997) ။ antioxidants နှင့်လူ့ရောဂါ: အထွေထွေနိဒါန်း။ အာဟာရသုံးသပ်ချက်များ၊ ၅၅ (၁)၊ S44 ။
Herr, ဗြဲ, & Büchler, အမ်ဒဗလျူ (2010) ။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်အခြား cruciferous ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အစားအသောက်ပါဝင်သူများ - ကင်ဆာရောဂါကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုထုံးအတွက်သက်ရောက်မှုများ။ ကင်ဆာကုသမှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, 36 (5), 377-383 ။
[၂။ ၃]Slemmer, ဂျေအီး, Shacka, ဂျေဂျေ, Sweeney, အမ်ဗြဲ, & Weber, ဂျေတီ (2008) ။ ဦး နှောက်ဒဏ်ရာနှင့်အိုမင်းခြင်းတို့ကိုကုသရာတွင် Antioxidants နှင့် free radical scavengers ။ လက်ရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတုဗေဒ, 15 (4), 404-414 ။
Somjen, G. အ G. အ (1979) ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေရဲ့ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက်ပို။ ဆဲလ်ပိုတက်စီယမ်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ချက်, 41 (1), 159-177 ။
Shapiro, အက်စ်အက်စ်, & Saliou, C တို့ (2001) ။ အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဗီတာမင်၏အခန်းက္ပ။ အာဟာရ, 17 (10), 839-844 ။
Xie, Z. , Komuves, အယ်လ်, ယု, ဆိုးကျိုး C. , Elalieh, အိပ်ချ်, Ng, D. C. , Leary, C. , ... & Kato, အက်စ် (2002) ။ ဗီတာမင်ဒီဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းပါးမှုကြောင့်အရေပြားအပေါ်ယံကွဲပြားခြင်းနှင့်ဆံပင်သားပေါက်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စုံစမ်းအရေပြားရောဂါဗေဒ၏ဂျာနယ်, 118 (1), 11-16 ။
ဟင်။ (2018, 30 အောက်တိုဘာလ) ။ ဘရပ်ဆဲလ်အညွှန့်ချက်ပြုတ်ရန်ကျန်းမာသောနည်းလမ်း ၄၀ [ဘလော့ဂ်ပို့စ်] ။ https://www.cookinglight.com/food/recipe-finder/brussels-sprouts-recipes မှရယူရန်
အိမ်မှာ underarm ဆံပင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း